ကုလ သံတမန်၏ ခရီးစဉ် အာဏာသိမ်းမည့် အရေး လျောင်လွှဲနိူင်ခဲ့ဟု ဆို - Eureka Myanmar | Myanmar news, headlines, top stories , culture and entertainment.
Home Article Military Myanmar News Opinion Political ကုလ သံတမန်၏ ခရီးစဉ် အာဏာသိမ်းမည့် အရေး လျောင်လွှဲနိူင်ခဲ့ဟု ဆို
Article Military Myanmar News Opinion Political
ကုလ သံတမန်၏ ခရီးစဉ် အာဏာသိမ်းမည့် အရေး လျောင်လွှဲနိူင်ခဲ့ဟု ဆို
ကုလသမဂ္ဂ သံတမန်သည် နိူင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ နှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အကြား သင့်မြတ်အောင် မရည်ရွယ်ပဲနှင့် ပြု လုပ်ပေးခဲ့ သလို ဖြစ်သွား ခဲ့ရကြောင်း မြန်မာအရေး သတင်းစုံ သိသူ လာရီ ဂျေဂင်က ဘန်ကောက် ပို့စ် မှာ အခုလို ရေးသားထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပါတ်ကျော်က ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ထိတ်တန်းအဆင့် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပြီးချိန်ကစ၍ ခေါင်း ဆောင်နှစ်ဦးအကြား တင်းမာမှုတွေ ဆူပွက်လာ နေခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲ ကုလ အထူးသံတမန်ခရစ်စတင်း ဘာဂျင်နာ က သူမ၏ ပထမဦးဆုံး ပွဲဦးထွက် ခရီးစဉ် အဖြစ် မြန်မာပြည်ကို ရောက် ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုခရီးစဉ်အတွင်းမှာပဲ ဒေါ် အောင်ဆန်ုးစုကြည်နဲ့ကော ကာကွယ်ရေး ဦးစီး ချုပ်နဲ့ပါ အကြောင်းအရာ အတော်များများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပြီး ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးအကြား ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တင်းမာမှုတွေ ပြေလျော့လာစေခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကုလ နဲ့ မြန်မာအကြား ပိုမိုပြီး အပြုသဘောဆောင်မယ့်ဆက်ဆံရေး အတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်ကိုလည်း ချမှတ်ပေးနိူင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲက အစိုးရမှရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေး ကာလအတွင်းလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်
များ အပေါ် စုံစမ်းနိူင်ဖို့ ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ ကြေငြာအပြီးမှာ ကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းမတိုင်မီ နှစ်ရက်က ကုလအေဂျင်စီများနဲ့လည်း ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်လာရေး အတွက် နားလည်မှု စာခ္ဈန်လွှာ ကိုလက်မှတ်ရေးထိုး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စာခ္ဈန်လွှာပါ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ယခုထိ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုး များနဲ့ တပ်မတော်ဖက်မှာ သံသယတွေ ကြီးထွားလာနေပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတွက်လည်း ကုလသံတမန်က အခုလို လျုိ့ ၀ှက်ထားခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဖြစ်စေချင်သလို မဖြစ်ပဲ အကျိုးယုတ်ဖို့သာရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နားချနိူင်ခဲ့တဲ့ အတွက် လာမည့် ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။
အရပ်သား အစိုးရ နဲ့ စစ်တပ်အကြား အဓိကမကျေမလည် ဖြစိခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကတော့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှာ နိူင်ငံခြားသား က္ဈမ်းကျင်သူ တဦး ထည့်သွင်းထားတဲ့ ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို စစ်တပ်အနေနဲ့ အရပ်သား အစိုးရ ကျော်လို့ မရတဲ့ မျဉ်း အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတွက် အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလိချုပ် မင်းအောင် လှိုင်က ဒေါသတကြီး တုန့်ပြန်ခဲ့ပြီး အာဏာ သိမ်းဖို့အထိ ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျား အနေနဲ့ အစိုးရ ကို နိူင်အောင် မကိုင်တွယ်နိူင်ရင် ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပြဌာန်းထားတဲ့အတိုင်း တပ်မတော်က အာဏာပြန်ယူရလိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့ကြောင်း.၎င်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ သတင်းရပ်ကွက်က ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းပြောသည့် အာဏာသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလား နိူင်ငံတခုလုံးကိုလား ဆိုတာ တော့ ကွဲကွဲပြားပြား ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပါဖူး။. ၂၀၁၂ နောက်ပိုင်းမှာ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အရေးပေါ် အခြေ အနေ ကြေငြာခဲ့ဖူးပါတယ်။
အစည်းအဝေးက ဗြုန်းဆို ရပ်ဆိုင်းသွားပြီးတဲ့နောက် နှစ်ဖက်စလုံးက ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ရှေ့တန်းက တပ်တွေ ပြန်ခေါ်လာတာတွေ ပြုလုပ်လာတာ တွေ့ရပ့ါ တယ်။
ကေအိုင်အေ နဲ့ တိုက်ခိုက်နေမူများကိုလည်း မိုးကျလာတာကြောင့်ပဲလား မသိ ရပ်ဆိုင်းသွား ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ကုလ သံတမန်ရဲ့ ကြားဝင်ခဲ့မှုက အဆိုပါ ထိပ်တိုက်တွေ့မဲ့ အရေး အနေအထားတွေ ပြေလျော့သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် နဲ့ အချိန်အတော်ကြာ ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ၎င်းမှ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တွင် ပြည်ပက ပါဝင်မှုကို သဘောတူညီ သွားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဖက်က အကြီးအကျယ် လိုက်လျောပေးခဲ့မှု ဖြစ်ပြီး ပါးနပ်ချက်ခြာတဲ့ လုပ်ရပ်လို့လည်း ပြောနိူင်ပါတယ်။
သို့သော် ကော်မရှင်ကို ထိုင်းဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဖြစ်သူ ဆူကရီယတ် အကြံပေးခဲ့သလို လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခွင့်ပြုတဲ့ သဘောတော့ မဟုတ်ပါဖူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်ကလည်း အဇွဲ့ကို ဦးဆောင်မယ့်လူ ယခုထိ ရွေးချယ်လို့ မရသေးပဲဖြစ်နေပါတယ်။ တီမော ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိူဘဲလ်ဆုရှင် ဂျိုဆေး ဟော်တာ အပါအ၀င် အလားအလာ ရှိတဲ့လူတွေကို တီး ခေါက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဂျို ဆေး ဟော်တာက ဒီအလုပ်ကို လက်ခံဖို့ ငြင်း ပါယ်ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန် မှာ ရှိတဲ့ လေ့လာသူများနဲ့ နိူင်ငံခြားသံတမန်တွေကတော့ "ရူးတဲ့လူသာ ဒီအလုပ်ကို လက်ခံလိမ့်မယ်" လို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အစိုးရ ဖက်ကတော့ အတော်များများကို တီး ခေါက်ပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် အကောင်းမြင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေး ဘုတ်အဖွဲ့ကတော့ အာဆီယံ ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ပြောဆိုထားတဲ့ အတွက် မူဆလင် နဲ့ အနောက်နိူင်ငံသား မဟုတ်ရင် ဖြစ် တယ်လို့ ပြောနေတဲ့ စစ်တပ်အဖို့ ကျေနပ်မှာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်မယ့် လူတွေ မသေခြာသေးပေမယ့် စစ်တပ်ကတော့ ကော်မရှင်ကို လက်ခံလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း လူရွေးမယ့် အထဲမှာသူတို့ ပါဝင်ဖို့ ပြောလာခဲ့ကြပါတယ်။ ပါဝင်မယ့်လူတွေကို အစိုးရ၊.စစ်တပ်နဲ့ ရခိုင်ဒေသခံတွေသုံးဦးသုံးဖလှယ် သဘောတူရမယ့်လူ ဖြစ်ရမယ်လို့လည်း အကြံပေးနေပါတယ်။
မည်သို့ ပင် ဖြစ်စေ စစ်တပ်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ အောင်မြင်နိူင်မှာ ဖြစ်လို့ ဒီအတားအဆီးကို ရှေ့လျောက် ကျော်ဖြတ်ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။
လောလောဆယ် ကုလ သံတမန် အနေနဲ့ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးအကြား ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်တိုက်ပွဲကြီးကို လျောင်လွှဲပေးနိူင်ခဲ့ပေမယ့်
ရှေ့ လျောက် အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု အဆုံးသတ်သွားပြီလို့ ပြောလို့ မရသေးပါဖူး။
ထို့အတွက် စစ်တပ် နဲ့ အစိ့းရ အကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းတဦးက ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်
ဤ အရေး ပြေလည်အောင်လည်း ကုလသံတမန်ကို ဖြေရှင်း ပေးနိူင်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
သူမအနေနဲ့လည်း အတော်ကို ခရီးရောက်အောင် ပြုလုပ်နိူင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်လို့ ရှေ့ ဆက် ဒီအတိုင်းပဲ သွားနိူင်လိမ့်မယ်လို့ မျော်လင့်နေပါ
တယ်။ ထို့ အတွက် သူမ၏ အခန်းကဏ္ဍသည်အခြားအရာများသာမက "ကုလသမဂ္ဂ နဲ့ မြန်မာအကြား ပေါင်းကူးတံတားသဖွယ် ဆောင်ရွက်သွားမယ်" လို့ ခရီးစဉ်အပြီး ကြေငြာချက်မှာဖေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
(လာရီ ဂျေဂင် ရေးသားသော "UN envoy averts possible military coup in Myanmar" ဆောင်းပါးအား.ဘန်ကောက်ပို့စ် တွင် ဖေါ်ပြထားသည်ကို ပြန်လည်တင်ပြပါသည်)
Credit : Hla Soe Wai
Tags: Article Military Myanmar News Opinion Political